PARKING Soamandrakizay Anjaran’ny polisy ny miandraikitra ny 33ha
Iaraha-misalahy amin’ireo eo anivon’ny tafika Malagasy sy ny zandarimariam-pirenena ary ny polisim-pirenena ny fiantohana ny fandriampahalemana mandritra ny fivahinianan’ny Papa.
Efa samy voatsinjara ny andraikitry ny tsirairay. Anisan’ny andraikitra sahanin’ny polisy manokana ny fandaminana ny fiara izay hipetraka eny amin’ny Parking Soamandrakizay mirefy 33 ha. Nanatanteraka fanazarana faobe ny avy eo anivon’ny polisim-pirenena ny talata 3 septambra teo. Polisy an’arivony no nandray anjara tamin’izany nahitana ireo avy eo amin’ny “Compagnie urbaine d’intervention”, avy eo anivon’ny kaomisaria foibe, ireo vondrona manokana na ny “Unités specialisées de la Police nationale” ary ny hery vonjy taitra na ny “Force d’intervention de la Police nationale”. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena, afaka mandry ivohon’ny vato ireo mpivavaka sy ny mponin’ny renivohitra ao anatin’ireo 5 andro ireo. Mavitrika avokoa ireo mpitandro filaminana amin’izao fitsidihan’ny avy any Vatican izao ka miandrandra ny fitohizan’izany ny olom-pirenena rehetra.